YAKHELWE UKUCHITHEKA: AKUKHO NTO IPHOSAKELEYO NGOPHONONONGO LWEALBHAMU YOTHANDO - IINDABA
Akukho nto igwenxa ngothando
Kukho Akukho nto ingalunganga ngothando , esandula ukuphinda ikhutshwe kwi-vinyl emva kokuba ingashicilelwanga kwifomathi phantse amashumi amabini eminyaka, ize ichaze umtya othile wedwala le-indie, ishiya isixa semisonto ethathwe yiModest Mouse, iDeight Cab yeCutie, kunye nezinye ezininzi.
NguMeyi 1994 eBoise, eIdaho — kwinyanga enye emva kokubhubha kukaKurt Cobain. Nangona le dolophu ikumgama oziikhilomitha ezingama-500 kumazantsi mpuma eSeattle, phantse iiyure ezisibhozo ukuqhuba, ayikude le ndawo yelizwe. Unemoto yakho, kwaye yonke into isasazekile, kwaye uhlala ukulungele ukugubungela umhlaba xa ufuna njalo. Ke ngaphandle komgama uBoise unokuthathelwa ingqalelo njengenxalenye yePacific Northwest, ukuba wolula inkcazo kancinci, kwaye indawo yomculo apho, enje, inonxibelelwano nezixeko zayo ezinkulu ezingabamelwane. Kukho ibhendi yeBoise ebizwa ngokuba Yakhelwe ukuchitheka ekhokelwa nguDoug Martsch, owayekade ekwi-indie rock band ese Seattle ebizwa ngokuba yiTreepeople.
Amabini amabali kwi-Pacific Northwest rock scene kwii-80s nasekuqaleni kwee-90s yi-ramshackle D.I.Y. Indawo ejikeleze iRekhodi K kunye negrunge, okwangoku ngelixesha yayisele ingaphaya komhlaba yayisendleleni yokuba yinto nje. Ukubhalwa kwengoma kaMartsch kuye kwafana nokujonga ngamehlo abanzi nokudlalayo kwe-indie pop, kodwa iimpembelelo zakhe zenziwa ngumsebenzi wakhe wegitala, ongadibananga ne-grunge eyiyo kodwa unokulandelwa yenye yeempembelelo zomdlalo, uJ Mascis UDinosaur Jr. Emva kokuba enze icwecwe elinye, ngo-1993 Amanqatha okuGqibela aMnye , Yakhelwe ukuchithela ukubuyela eSeattle ukurekhoda ukulandelelana kwabo, Akukho nto igwenxa ngothando , irekhodi elinokutshintsha yonke into ebhendi. 'Leyo yayiyirekhodi lokugqibela xa ndandikwazi ukwenza umculo ngaphandle kokucinga ukuba abantu abaninzi baya kuwuva,' utshilo uMartsch JIKELELE ngo-1999. 'Yenza umahluko. Ndingathanda ukucinga ukuba ayinamsebenzi, kodwa ayinamsebenzi. '
Oko kungaziwa, ngaphandle kokulindelwa kwinto ekugqibeleni eyaba sisiseko se fan, wanika uMartsch ilayisensi yokubhala eyona albhamu yakhe. Akukho nto igwenxa ngothando , esandula ukuphinda ikhutshwe kwi-vinyl emva kokuba ingashicilelwanga kwifomathi phantse amashumi amabini eminyaka, ize ichaze umtya othile wedwala le-indie, ishiya isixa semisonto ethathwe yiModest Mouse, iDeight Cab yeCutie, kunye nezinye ezininzi. Kodwa ngaphaya kwempembelelo yayo, ithatha ilizwi eliyinyani lokubhala ingoma kanye ngalo mzuzu kanye waqonda ukuba uza kunikela ngantoni. Yialbham njenge globhu yekhephu, indawo encinci apho amabali aqhagamshelekileyo enzeka khona kwaye unokufumana umbono owahlukileyo kuwo kuxhomekeke kwinqanaba lakho. Eyakhelwe ukuchitha yayineerekhodi ezinkulu phambi kwabo, kodwa ngekhe benze enye icwecwe ngeli nqanaba lokusondelelana.
Akukho nto igwenxa ngothando Ufumana uMartsch kwi-cusp yokuba mdala okwenyani (umntwana wakhe wokuqala wazalwa malunga nexesha elenziwa ngalo, kunye neemvakalelo zakhe ezijikeleze oko zibhalwe ku'Cleo '), kodwa elidlulileyo lisondele ngokwaneleyo apho alibona licace gca. Iingoma ziqaqambisa iimvakalelo ezincinci kunye neemvakalelo ezingenaziphumo zibonakalayo ngalo mzuzu kodwa ngandlela thile zihlala kunye nawe kuzo zonke iinkcukacha. Kwaye uMartsch unetalente ekhethekileyo yokuchonga ixesha lokuphosa abanye abanokuthi banxibelelane nalo. Ndisengumntwana, ndandinemincili yokufunda ngamakroza- apho ayemele ukuba abekhona, indlela amachaphaza adityaniswa ngayo, iintsomi awayezimele — kodwa ndakhawuleza ndaqonda ukuba ekuphela kwento endandinokuyenza yayiyi-Big Dipper. Ndichithe iminyaka engama-20 ndinaloo ngcinga ingenantsingiselo entlokweni yam, emva koko ndeva ingoma kule cwecwe eyaqala ngala mazwi 'Xa ndandisemncinci umntu wandikhomba / ezinye iinkwenkwezi kodwa eyona nto ndiyibonayo '(' Big Dipper ') kwaye ngequbuliso le ngcinga yabucala iphambeneyo yaba ngamava ekwabelwana ngawo, enye isongelwe ngaphakathi kwengoma ye-pop enamandla amakhulu.
Ii-Nuggets ezinje, ezibangelwa kukuqonda kukaMartsch kunye nesisa ngokweemvakalelo, ziligazi lobomi Akukho nto igwenxa ngothando . Kwi 'Ngentsasa' ujonga ubunzima bokonwabela umzuzu wangoku xa ezele lixhala ngekamva ('Namhlanje licaba phantsi kobunzima bosuku olulandelayo, usuku olulandelayo, usuku olulandelayo, usuku olulandelayo') kunye nendlela ithuku elithatha ngayo ngamaxesha okungaqiniseki. Zonke iinkcukacha ze-albhamu ezikhethekileyo ze-lyric-kwaye zininzi-khangela. ' Isixhenxe phezulu Ndichukumise ubhontsi wakhe, ebesazi ukuba ndim '(ovela' kwiTwin Falls ') angavakala exabiseke kakhulu komnye umbhali wengoma, kodwa uMartsch uhlala egwele ubumnandi bakhe nokuzihlaziya. 'Utata wam wesibini ujongeka njengoDavid Bowie / Kodwa umthiyile uDavid Bowie,' uhamba umgca 'kwiDistopian Dream Girl', ngokuqinisekileyo lixesha lokuqala kwimbali yomculo we pop ukuba le ngcinga ibonakalisiwe. Emva koko ulandela 'Ndicinga ukuba uBowie upholile / ndicinga Hlala Imithetho, utata wesibini usisidenge, 'ebonisa nje ukuba unxibelelana njani noMartsch neemvakalelo zokufikisa, loo minyaka xa ujikeleza ebomini, inyanda yemithambo-luvo, kwaye akukho nto iyavakala.
Umculo kunye namalungiselelo kwi-albhamu yonke into ehambelana nomxholo. Eyakhelwe ukuchitheka ibonisa kuphela iingcebiso kumatshini wokuqhushumba oza kuba kamva. Iimpawu zegitare ye-Acoustic kakhulu, iisarlo zesello kude ngasemva, zisebenza njengoluhlobo lwekwayara yamaGrike yokulandela umkhondo weemvakalelo zabalinganiswa bengoma. Kanye emva kwethutyana, uMartsch ubetha ibhokisi yestomp kwaye akhuphe isandi esinengxolo, ukugqwethwa kususa ingqumbo yakhe yomlomo kunye nomnqweno. Ininzi indawo evulekileyo, kwaye ilizwi lakhe licoceke ngakumbi kunokuba liza kuba mva. Ukulandelelana kunye nokuhlela kuyakhazimla, ukusukela 'Ekuseni' ikhefu lokwahlulahlula okwesibini emva kokuba uMartsch ekhwaza esithi 'Yima!' Unqumamo phakathi 'kweTwin Falls' kunye 'Nabanye' elibenza babonakale ngathi yingoma enye ende. Sisandi esincinci kwangaxeshanye sikhulu, i-keepake ifakwe epokothweni enokuthi nangaliphi na ixesha ibe ngumlingo webhodi yebhodi.
Ngokugxila ebuntwaneni, uhlobo lobukho, kunye nokukhangela intsingiselo, kunokwenzeka ukuba uve Akukho nto igwenxa ngothando ngokwemigaqo 'Kuthekani ukuba bekukho enye indalo kubhontsi wam?' - isitayile sefowuni kwigumbi lokulala. Kodwa intliziyo evulekileyo kaMartsch ikugcina usecaleni lakhe. Kukho ubuhle bokwenyani kuphando oluphosakeleyo aluchazayo 'kwiMoto', ingoma ezaliswe yimigca ecacisa ukuba kunjani ukuba ngumntwana onwabileyo kodwa oyikisayo efunda ngobomi ngokulingana kwaye aqale: 'Uyakufumana ithuba lokuthatha hlukanisa umhlaba / kwaye ubone ukuba isebenza njani. Ukumamela eli cwecwe ngo-2014, omnye umgca kule ngoma, 'Ndifuna ukuyibona xa ugityiselwa ngamatye emva kwemvula entlango,' undigcine ndibuyela kwindawo yokugqibela kwifilimu kaRichard Linklater Inkwenkwana , xa umlinganiswa ophambili esimbonileyo ekhula ukutyhubela iminyaka ethatha amakhowa kunye nokunyuka nge-canyon eWest Texas, indawo engafaniyo ne-Idaho. Indikhumbuze ukuba esinye isizathu sokuba abantu abatsha basebenzise iziyobisi kungenxa yokuba banika ithuba lesibini lokubona izinto okokuqala ngqa. Ukuboleka umgca wokugqibela 'kwiMoto', kule albhamu uMartsch wakhumbula xa wayefuna ukubona 'iimuvi zamaphupha akhe.' Uninzi lwethu olunqwenela ukuba lungaze luzaliseke, kodwa Akukho nto igwenxa ngothando ngumbhiyozo womnqweno ngokwawo, ukuba sesichengeni okuza nokuzivumela ukuba ucinge ukuba kunokwenzeka.
ezona zixhobo zilungileyo ezingenazingcingo ezinomsindo
Eyona vidiyo zomculo indie
baleka iigugu masambe
kid cudi speedin bullet ezulwini
amabhotwe e-shabazz-emnyama emnyama
Umdlalo wodumo we-2018 nba
Ingcinga emnyama ishushu 97